KyiMayKaung: Completed translation of Daw Si Si Thwe (Mrs. Sein Win)'s letter to Burmese authorities aboutavisitation visa--
Completed translation of Daw Si Si Thwe (Mrs. Sein Win)'s letter to Burmese authorities aboutavisitation visa--
I have many questions in my head. What about those foreigners who come intoacountry which says it needs foreign aid?
အိမ်ပြန်သင့်ပြီ။ အထူးဆု မလိုချင်ပါ။ “အားလုံးအတွက် ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိခြင်း အမြန်ဆုံးရခဲ့ရင်” က၀ိအိုတယောက် ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့နေပြီဖြစ်တဲ့ သူ့အကို (နိုင်ငံအတွက် ၅ နှစ်ကျော် ထောင်ဖြတ်ခဲ့ရသော) နှင့် တွေ့ခွင့်ရမှာပါ။
It is time to return home to Burma. If all can be treated with dignity, he will be able to see his brother who spent5years in jail asapolitical prisoner and is in poor health.
(Translater's note. I am not sure if this is Ko Aye Win, who used to work in the Statistics Department of the Institute of Economics, Rangoon. I spoke to Daw Si Si Thwe on the phone today, and she said she/they had sent word to Saya's brother about not gettingavisa. I personally know so many people who never saw their parents again--and I am one--and also those whose parent was hanging on, and died soon after seeing the child one last time. The pain and suffering caused by this military government is infinite.)
မိအိုများ ဖအိုများလည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ ဝေးကွာနေတဲ့ သားသမီးများနှင့် တွေ့ခွင့်ရမှာပါ။
All mothers and fathers who are growing old wish to see their children, it is only natural.
တိုင်းတပါးသားများလည်း မြန်မာပြည်ရဲ့ နွေးထွေးမှု၊ ယဉ်ကျေးမှုကို အပြည့်အ၀ ခံစားခွင့် ရရှိမှာပါ။
Others born overseas will also wish to experience the legendary warmth and hospitality of Burmese culture to the full.
Si Si Thwe--S/OKa 889818
Temporarily in USA.
စာကြွင်း – ပြည်သူတင်မြှောက်ထားသော ပြည်သူ့အစိုးရကို လေးစားရိုသေသောအားဖြင့် တိုင်းပြည်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့် ကူညီခြင်းမှ လွဲ၍ ကျန်တာမလုပ်ပါဟု ရေးထိုးခဲ့ပြီးပါပြီ။
Postscript. (We) have already signed that we will not "do anything other than work for our duty to the country to help." We signed this asasign of respect foragovernment elected by the people.
(Translator's note: Daw Si Si Thwe is referring to the present NLD or National League for Democracy government--I do not know its official name--but this clearly shows habits of control and oppression die hard. I do not trust the Burmese embassy personnel. She sent me attachments of the forms they were asked to sign, but I have not opened them, as I have seen too many of these in my lifetime.)
(၇၊၇၊ ၂၀၁၆ work history form) ။ ကျန်တဲ့ ခံဝန်ချက်များ ထပ်မထိုးသင့်တော့ပါ။
There is no need for us to sign the "work history form."
အိုခြင်းကိုလည်း အသက်အရ သုံးနှုံးထားပါသည်။ ဥာဏ်အားတွင်တော့ သတင်းစာတွင် ဖတ်ရသော “လေ့ကျင့်ထားသော အသက် ၇၀ကျော်၏ ဥာဏ်အားသည် အသက် ၂၀ နှင့် အတူတူပင် ဖြစ်ကြောင်း” ၏ နမူနာပြယုဂ် တခုဖြစ်ပါသည်။ အခြားပြယုဂ်များလည်း အများကြီး တွေ့နေရပါသည်။ နောက်ထပ်ပြယုဂ်တခုမှာတော့ ရက်ပိုင်းအတွင်း တွေ့ခဲ့ရသော အသက် ၉၈ နှစ်အရွယ်တွင် ဟင်းချက်နိုင်တုန်း ဖြတ်လတ်နေတုန်း၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဝေးကွာနေသူများကို နာမည်နဲ့တကွ မေးနိုင်သော မှတ်ဥာဏ်အား ကောင်းဆဲဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်ကတော် ဘွားဘွား ဒေါ်ခင်ကြည်၏ ညီမ အန်တီ မာ ဖြစ်ပါသည်။
( I did not translate this section as it appearsabit unrelated)
Awaiting the time when no one will be asked to sign an affadavit.
Si Si Thwe (S/OKA 089818)
July 20th, 2016, 9.50 PM
Posted by Kyi May at 11:46 PM